Rugby vehivavy: tafiditra ao anaty «Top 50 mondial» ny Makis | NewsMada
Namoaka ny filaharan’ireo firenena tsirairay avy, rugby vehivavy, ny federasiona iraisam-pirenena (IRB), taorian’ny fahavitan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ny rugby lalaovina olona 15 na ny “Africa women’s cup 2019” farany teo. Vaovao tsara ho an’i Madagasikara satria tafiditra ao anatin’ny “Top 50 mondial” ny Makis. Eo amin’ny laharana faha-41 ny misy an’i Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Sambany ary voalohany, eo amin’ny tantaran’ny rugby vehivavy malagasy, no voalahatra ao anatin’ny laharana iraisam-pirenena. Raha tsiahivina, mitana ny laharana voalohany eran-tany, ho an’ny andriambavilanitra, ny All-blacks-n’i Nouvelle-Zelande, arahin’i Three Lions-n’i Angletera ary fahatelo ny Les Bleus-n’i Frantsa.
Ankoatra izay, fahadimy aty Afrika ny Makis de Madagascar, aorian’i Afrika Atsimo, tompondaka 2019, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, hatao any Nouvelle-Zelande, ny taona 2021. Faharoa i Kenya, fahatelo i Namibia ary fahefatra i Zimbaboe. Azo lazaina fa nihatsara ny fampiroboroboana ny taranja baolina lavalava malagasy, amin’izao fotoana izao.
Ny Makis vehivavy izay handeha hiatrika ny fifanintsanana, ho an’ny “Lalao olympika 2020”, hatao any Japon, eo amin’ny rugby lalaovina olona 7. Fihaonana, hatao any Tonizia, ny volana oktobra ho avy izao.
Mandra-piandry izany, tontosa ny faran’ny herinandro lasa teo, teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny “Top 20”. Anisan’ny nisongadina ny fandresen’ny Cnaps Sport ny FTBA tamin’ny isa mavesatra, 44 no ho 24. Ankoatra izay, resin’ny Uscar (Fivondronana), tamin’ny isa 26 no ho 13, ny US Ikopa ary 41 no ho 10 ny nanilihan’ny Tam Anosibe ny VTMA Antsalovana raha ny STM (Savony), nampiondrika ny Matadorea, tamin’ny isa 27 no ho 22. Novizanin’ny 3FB (Fahasalamana), tamin’ny isa midangana, 27 no ho 6, kosa ny 3FAI.